Ndị na -emepụta ngwaahịa | Ndị na -ebubata ngwaahịa China & ụlọ ọrụ
Ikuku chaja na Sound Box Blue nha nha njikọ
Nkọwa ngwaahịa aha aha speaker Igwe okwu nkwụnye ikuku Model No input ntinye X7101 ： DC5.0V/3A 9V/2A 12V/1.5A Nrụpụta ： Max 10W Nchaji anya: ≤8mm ụdị ụda Speaker Ọkà okwu ọdịyo smart ： 1.5〃.4 ohms Noise ： 95dBA Bluetooth version ： Jerry2.1+EDR Sensitivity ： 350MV Agba Feat Njirimara ngwaahịa ojii Ikuku chaja Bluetooth ọkà okwu Ikuku na-akwụghachi playback Bluetooth Nkwanye oku na-enweghị aka na-akwado nkwado ngwa ngwa Rịba ama: Ngwaahịa a dabara naanị ekwentị mkpanaaka na sma ...
Njirimara ngwaahịaNY7501G-1 bụ mgbawa na-ekesa nke ọma maka chaja ikuku mepụtara dabere na NY7501G. Chipset chaja cha cha cha cha nke NY7501G bụ ụdị mgbawa na -ebufe maka chaja ikuku nke dabara na ọkọlọtọ Qi nke Wireless Power Consortium (WPC), nke nwere ike nweta ike nnyefe 5W maka chaja ikuku ikuku. Ejiri ya na QFN44-0505X075-0.35, a na-etinye ya n'ime ya na mgbaze mgbaama, yana ọtụtụ nchedo. Egosipụtara ya na ihe nchọpụta ala ọzọ ...
EV Fast Charger DC60kw nwere eriri CCS CHaDEMO maka ọdụ chaja EV
Njirimara Njirimara Nkà na ụzụ Newya nwere ọgbọ ọhụrụ nke ikpo chaja nwere ọgụgụ isi maka ihe ọmụmụ ume ọhụrụ. Dabere na ikpo ọkụ nke nwere ọgụgụ isi agbakwunyere na nyocha nke LINUX mepụtara, ọ bụ nke mbụ ịghọta na enweghị nsogbu na ịntanetị nke ihe na obodo mara mma. Advantage Newyea's DC chaja ngwa ngwa ka emebere maka chaja ngwa ngwa, dabara adaba maka ụdị ụgbọ ala eletrik niile, gụnyere ndị nwere sistemụ batrị ọkụ dị elu. Kọmpat Newyea ...
Nkọwa ngwaahịa 1. Itinye oke A ga -etinye nkọwapụta modul ihe nnata chaja ikuku a na chaja ikuku 15W. Ịchọta anya ihe na -erughị 10mm 2. Iwu Nchedo Gburugburu Ebe obibi: RoHS 3. Dị ka nchekwa na EMC Criterion: WPC 1.2 4. Nchebe na EMC Nkwado: CE / FCC 5. Ejirimara eletriki: Circuit Ule Ọ bụrụ na a ga -eme nnwale na sekit akọwapụtara, jide n'aka na ị na -eji sekit na -esonụ. Ọnọdụ ọrụ ịnata chaja ikuku 15w nke ikuku ： Electromagnetic indu ...
Smart Integrated Fast Battery Charger maka Eletriki DC283 KW Fast Charger
Njirimara Njirimara Nrụpụta ike ruo 240KW DC nwere GB / T, IEC62196-3 (Combo 1 / Combo 2) egbe 94% arụmọrụ ike Wired na njikọ ikuku maka ijikọ na CMS. Ngosipụta LCD enyi na enyi maka interface ndị ahịa. ID 55 Ọdụ chaja n'èzí Advantage Newyea DC280KW dị mma maka azụmaahịa dị nso na etiti obodo na ụzọ okporo ụzọ iji nye ndị ọkwọ ụgbọala EV ụgwọ ngwa ngwa ， enwere ike iji ya rụọ ọrụ, na-enye ndị ọrụ ụzọ ngwa ngwa iji bulie elu mgbe ha chọrọ ya. Ngwakọ mennekes AC ...
Nchaji Ultrafast EV na nchekwa nchekwa ike DC160KW EV Fast Charger
Njirimara ngwaahịa dakọtara maka CCS, ChadeMO na GB/T, egbe IEC62196-3 (Combo1/Combo2). 94% ike arụmọrụ. Njikọ wired/ikuku maka ijikọ ya na CMS. Ngosipụta LCD enyi na enyi maka interface ndị ahịa. IP55 ọdụ chaja n'èzí. Uru Newyea DC160KW na-emezu ihe achọrọ nke ọnọdụ dị iche iche, Ebe Nchaji Obodo: chaja ngwa ngwa nke Newyea DC nwere ike inye "mejupụta" ngwa ngwa na-agbakwunye 100 km (62 mi) nke oke n'ime obere oge site na nkeji 15-25. Ụlọ ahịa mkpọsa / ebe ịzụ ahịa: Newye ...
Newyea R&D center mejupụtara ndị prọfesọ, ndị dọkịta, nna ukwu, na ndị injinia si n'ụlọ na mba ofesi, na -elekwasị anya na mmepe nke teknụzụ chaja ikuku na wired smart maka ụgbọ ala eletriki, teknụzụ chaja ikuku obere na ọkara na azịza ọhụrụ, na -ekpuchi 10,000 square mita. Rlọ ụlọ ọrụ R&D na ụlọ nyocha R&D kwekọrọ n'ụkpụrụ klaasị mbụ nke mba ụwa na-emejupụta ụdị ihe ọhụrụ nke ndị ahịa, na-ewebata ndị ahịa n'akụkụ niile ...